Ingakanani isoftware exabisa kule bhlog-Geofumadas
Ikhaya/ArchiCAD/Zingaphi iprojekthi ezifanelekile kule blogi?
ArchiCADAutoCAD-AutoDeskCadcorpGoogle umhlaba / imephuGvSIGIntelliCADGIS asiboniseMicrostation-BentleyEhlabathini elungileyo
Kudala ndibhala malunga nezihloko zetekhnoloji eziphambeneyo ngaphezulu kweminyaka emibini, ihlala isoftware kunye nokusetyenziswa kwayo. Namhlanje ndifuna ukuthatha ithuba lokwenza uhlalutyo malunga nokuba kuthetha ukuthini ukuthetha ngesoftware, ngethemba lokwenza uluvo, ukugqamisa ubuhle bayo kunye nendlela abasabela ngayo kwingeniso yezoqoqosho kunye namagama avelisa i-traffic kwi-Intanethi, ubuncinci malunga noku. kwintengiso nge-AdSense.
software Amangenelo abandakanya yena Utyelelo olubandakanya wena Ingeniso eveliswayo
Umhlaba ka-Google 144 12,257 16.24
GIS asibonise 78 512 2.32
Ehlabathini elungileyo 30 215 0.03
Ndiye ndabonisana ne-Google Analytics, ngokusekelwe kwiinyanga ezi-5 zokugqibela, ngokubuza ngokubandakanya igama elingundoqo kunye nokusebenzisa zombini igama lenkampani kunye nesofthiwe ephambili. Ukutyelelwa okupheleleyo kulawo magama angundoqo kwakuyi-113,953 kwaye i-$ 320.02 iyonke ivela kumagama angundoqo.
Ndithathele ingqalelo amangeno okanye izithuba ezibhaliweyo ngokweendidi zephaneli yecala, ngaphandle kweMapinfo, apho kuye kwafuneka ndibhenele kuphendlo ngeLiveWritter kuba ukuza kuthi ga ngoku ayiloluhlu.
Kuyathakazelisa ukuba i-61,420 imele i-54% yokutyelela ngokupheleleyo ngeenjini zokukhangela ngokusebenzisa amagama angundoqo. Oku kuthetha ukuba ngaphezu kwe-50% yeendwendwe zam ezivela kuGoogle zivela kwezi nkqubo ze-11.
Xa kuthelekiswa ingeniso epheleleyo kwezi nkqubo ze-11, ngokuchasene nenani elipheleleyo elivela kumagama angundoqo, kugqitywa ukuba i-47% ivela apho.
Ngokumalunga nokubeka, sinokwahlula utyelelo ngenani lezithuba ezibhaliweyo, oku kuya kusinika impendulo yokuba iinkqubo zinayo kwi-traffic kwaye le yitafile.
I-AutoCAD iphendule ngaphaya kwento endiyithethile ngayo, ngenxa yokuthandwa kwayo kwaye ibone ukuba ukubonga kuyo, i-IntelliCAD iphendula okwesibini. Emva koko i-ArcGIS ilandelwa nguGoogle Earth ukuvala ezine zokuqala.
Kuyathakazelisa ukuba i-gvSIG kwindawo ye-Hispanic ibekwe ngcono kune-Microstation. Kwaye jonga njengoko i-GIS eninzi iwela ngasemva ngeCadCorp, okuthetha ukuba ayiloshishini lilungileyo ukuthetha malunga nesoftware ephantsi-phezulu ngokwengeniso yentengiso kodwa luloyiso ukufumana i-scoop.
Ngapha koko, ukubhala malunga nesoftware yenye yeembono zokuqala zale bhlog. Ukufumana itrafikhi bekulungile, ukufumana iindlela zeGoogle AdSense kuluncedo kodwa ukufunda into entsha yonke imihla… kuyanelisa kakhulu.
I-28 ekupheleni kweMvelo yeMvelo
Ukubhalisa ihlabathi lenene
Isicelo esidala, ndiyathemba ukuba ngenye imini ndiyakukholisa.
Kuya kufuneka ndikuxelele ukuba ndiyifunda rhoqo ibhlog yakho. Kwaye ewe, ndiyamkela ukuba ezininzi zezinto endizifundileyo zinento yokwenza ne-Autocad kunye neGoogle Earth, nangona ndifumene amanqaku anomxholo kwiinkqubo ezingaqhelekanga ezinomdla kakhulu, ngenxa yezizathu ezahlukahlukeneyo, andizange ndithathe inkululeko yokukhuphela okanye ukuyikhupha. ndicebise kubantu endibaziyo.
Ibhlog yakho njengoko injalo ibonakala kum isindululo sobugcisa esinomdla kakhulu (kwaye kutheni kungenjalo, izimvo zomntu) ezibonisa uhlalutyo olunomdla lweenkqubo ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo kwaye aziqhelekanga. Ewe, uthatha ixesha lakho ukufumanisa malunga nabo, ndicinga ukuba okanye bakuthumela ulwazi kuba ubandakanyeka ngandlela thile. Eyona nto ibonakala ilungile kum, kuba injongo kukwabelana ngoluvo lwakho lweemveliso kunye netekhnoloji ukuze abanye bafumane kwindawo enye kwaye bangahambi kumaphepha amaninzi, nto leyo ngamanye amaxesha asinalo ixesha lokuyenza.
Ngesi siseko kunye nokuzama ukuqonda intsingiselo yokugqibela yeblogi, kuya kufuneka siqonde ukuba ingeniso yakho yentengiso ithetha ntoni ebomini bakho (endiyicinga ukuba ayikho into enkulu) okanye ukuba kubaluleke kangakanani kuwe. Ndifumana umbono wokuba isibakala sokufunda-ukufundisa lolona ulwaneliseko olukhulu kwimeko yakho kwaye luyipragmatic, engalunganga okanye imbi.
Kuya kufuneka ndivume ukuba andifane ndingene "kwiintengiso", ngaphandle kokuba zifanelekile ukwazi inkqubo okanye imveliso. Into endizisa kwisicelo esilandelayo: (Ndiyazi ukuba andikantywi kwiphepha, kodwa…) Ngaba ungenza uphononongo kweyona mveliso ingcono, isetyenziswa rhoqo kunye neyona ihlaziyiweyo yeGPS? Ndingathanda ukwazi uluvo lwakho malunga nalo kunye novavanyo lokwazi ukuba yintoni umahluko oqhelekileyo phakathi kweemveliso kunye nokusebenza kwazo ngokubanzi. Ndiyathembisa ukubona amakhonkco owacebisayo… hahahaha!!! :-))
Yintoni Entsha AutoCAD 2012 | ukuthambekela